अघिल्लो कार्यकालमा सुरु भएका काम अब पूरा गर्छु : चिरीबाबु महर्जन (अन्तरवार्ता)अघिल्लो कार्यकालमा सुरु भएका काम अब पूरा गर्छु : चिरीबाबु महर्जन (अन्तरवार्ता) – Naya Page
कलाको नगरी ललितपुर महानगरपालिकामा दोस्रो कार्यकालका लागि चिरीबाबु महर्जन नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकामा युवा अनुहारका रुपमा प्रमुख र उपप्रमुख निर्वाचित हुँदै गर्दा ललितपुरमा भने पाका व्यक्ति नै दोहोरिएका छन् ।
पहिलो कार्यकालमा महानगरमा भएका विकासका काम र सरल व्यक्तित्वकै कारण उनी पुनः विजयी भएको महानगरवासी बताउँछन् । विगतमा तीन पटकसम्म वडाध्यक्षका रुपमा काम गरेका उनले ज्यापु समाजको अध्यक्ष भएर काम गरे । उनी गरिएको संवाद :.
प्रमुखका रुपमा निर्वाचित भएपछि अबका पाँच वर्षका यहाँका मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्रहरु के-के हुन ?
पहिलो कुरा मेले आफैले पहिले सुरु गरेका काम पूरा गर्नुपर्छ । एशियाली विकास बैंकसँग रु ५४ करोड अनुदानमा सम्पदा क्षेत्रमा ट्र्याक लाइन परियोजना अघि बढेको छ । यो काम अहिलेसम्म ६० प्रतिशत सकियो र ४० प्रतिशत बाँकी छ, त्यो सकाउनुपर्छ । अहिले बेस्सरी पानी पर्दा पाटन दरबार क्षेत्रमा जलमग्न बन्छ । ढुङ्गेधारामा पानी जम्छ । परियोजना पूरा भएपछि त्यो हट्नेछ ।
दोस्रोमा राजदल गणसँग समझदारी गरेर ३० रोपनी जग्गा फिर्ता लिइएको छ । त्यो जग्गा लगनखेलको अशोक स्तूपाको दक्षिण र पश्चिममा पर्छ । त्यहाँको पोखरीमा साढे दुई वर्षमा कमलका फूल फुलाउने लक्ष्य छ । त्यो ठाउँमा उत्तरमा सप्तपाताल पोखरी छ र सेनाको क्षेत्रमा रहेको पोखरी गरी जम्मा ४५ रोपनी जग्गा त्यहाँ छ । त्यहाँ ‘ग्रिन एण्ड ब्ल्यु फ्युजन प्रोजेक्ट’ बनाउने योजना छ । त्यसका लागि अध्ययन भइसकेको छ । सेनाको क्षेत्रमा भित्र जान नसकिने भएकाले बाहिरबाट हेर्न मिल्ने गरी बार लगाइनेछ । हामीले तेस्रो स्मार्ट सडक बत्ती जडान थालेकामा पहिलो चरण सकियो । दोस्रो चरणमा तीन हजार चार सय बत्ती जडान गर्दैछौँ । चक्रपथमा पनि स्मार्ट बत्ती राख्न लागिएको छ ।
महानगर कला नगरी हो र यहाँ प्रशस्त सम्पदाहरु छन् । मूर्त र अमूर्त सम्पदालाई राम्रोसँग हेरचाह गर्नुपर्छ । प्रत्येक सम्पदामा सुधार भइरहेको छ । भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भीमसेन मन्दिर सरकारसँग कति पनि पैसा नलिई पुनःनिर्माण गरिएको छ । सरकारसँग पैसा लिँदा ठेक्कामा काम गर्नुपर्छ र ठेक्कामा गर्दा त्यसको गुणस्तर कायम नहुने भएकाले चन्दा सङ्कलन गरेर त्यसको निर्माण गरिएको छ । सम्पदाका पाँच छवटा परियोजना जारी छन् र त्यो पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ ।
विगतका पाँच वर्षमा गर्न नसकेका र अबका पाँच वर्षमा गर्न चाहेका कुरा के-के छन् ?
मैले अघिल्लो कार्यकालमा गर्न नसेकका कुरा खासै छैनन् । हामीले ९० प्रतिशत काम गर्‍यौँ । गर्न नसकेको पनि हाम्रो कारणले होइन । विगतमा फ्लाइओभर बनाउने भनी अध्ययन भयो र यसको सम्भावना छ भनी अध्ययनले देखाएको छ । काठमाडौँमा जाइकाले माइतीघरबाट त्रिपुरेश्वरसम्मको फ्लाइओभर निर्माण गर्न अध्ययन गरेको थियो । उताबाट निर्माण हुँदा यता पुल्चोकको अशोक स्तूपाबाट एक दशमलव चार किमीमा फ्लाइओभर बनाउने हामीले योजना बनाएका थियौँ । उता अहिले त्यो बन्ने सुर छैन । हामीले हतारिएर बनाउँदा त्यसलाई लगेर जोड्ने ठाउँ छैन । त्यसैले फ्लाइओभर हामीले अहिले रद्द होइन स्थगित गरिएको छ । काठमाडौँले माइतीघर-त्रिपुरेश्वर खण्डमा बनाएमा हामी पनि बनाउन सक्छौँ ।
तपाईले अघिल्लो कार्यकालमा जनतासँग गर्नु भएका सबै प्रतिबद्धता पूरा भए ?
विगत पाँच वर्षमा हामीले अतुलनीय प्रगति गर्‍यौं । उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा सबै आवश्यक बाटोमा ढुङ्गा र इँटा छाप्ने काम भयो । अब त्यहाँ काम गर्न ठाउँ नै छैन । त्यसको आवश्यकता चक्रपथभन्दा बाहिरी वडामा छ । नीतिमा परिवर्तन गरेर बाहिरी वडामा धेरै बजेट विनियोजन गर्ने योजना छ । केन्द्रीय, प्रदेशस्तर, नगरस्तरिय योजना बाहिरी वडामा दिएका छौँ । हिजोका नगरका वडाभन्दा बाहिरी वडामा बढी बजेट छुट्टाइनेछ ।
हामीले २१ औं शताब्दीको स्मार्ट ट्राफिक बत्ती जडान गर्ने योजना बनाएका छौँ । हामीले अब जडान गर्न बत्ती एउटा बत्ती अर्को स्थानको बत्तीसँग आपसमा सञ्चार गर्न सक्ने किसिमको हुनेछ । एकातिर भीड भएमा अर्कोतिर पठाउन समन्वय हुनेछ । यस्ता बत्ती बागमती पुलबाट जावलाखेलसम्म पाँच ठाउँमा राखिनेछ ।
सरकारी विद्यालयमा स्थानीय अभिभावकको आकर्षण छैन र निजी विद्यालयका शुल्कका कारण अभिभावक हैरान छन् । यसमा तपाईको ठोस योजना के छ ?
यो महानगर शैक्षिक हब हो । यहाँका केही विद्यालय राम्रा छन् । त्रिपद्म माध्यमिक विद्यालय, प्रगति शिक्षा सदन, सैबुमा आदर्श सौललगायतका विद्यालय राम्रा छन् र त्यहाँ अभिभावकको आकर्षण छ । अरु धेरै विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घट्नुको कारण अभिभावकले विश्वास नगरेको हो । यी तीन विद्यालयजस्तै अरु आठ-दश विद्यालय बनाउनुपर्छ ।
महानगरमा ठूला अस्पताल छन् तर सहरी गरिबले त्यहाँ जान सक्दैनन् । उनीहरुको स्वास्थ्यमा पहुँच कसरी पुर्‍याउनु हुन्छ ?
ललितपुरमा भएका कला, संस्कृतिको संरक्षण र पर्यटन प्रवद्र्धनका योजना के-के रहेका छन् ?
काठमाडौँ उपत्यकाका दुई महानगर र १६ नगरपालिकामध्ये अहिले कुनै पनि आफै फोहर व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । सरकारले निर्माण गरेको बञ्चरेडाँडाको संरचना सम्पन्न हुन लागेको छ । सङ्घीय सरकारका तर्फबाट त्यो हस्तान्तरण भएपछि फोहरको मात्राका आधारमा रकम तिर्न हामी तयार छौँ ।
महानगरमा पहिले निर्वाचित भएर आएको आठ/नौ महिनामा नै ल्याण्डफिल्ड साइटमा फोहर फाल्न पाइएन । यहाँँ पनि फोहर छरपष्ट भयो र गाली खानुपर्‍यो । त्यसपछि आफै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले दक्षिणी भेगमा जग्गा अधिग्रहण गरेर काम अघि बढाएका थियौँ । महानगरको वडा नम्बर २१ र २२ मा हामीले छानेको जग्गामा त्यो काम गर्न हुँदैन भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पत्र पठाएकाले रोकिएको थियो । त्यो ठाउँ उडानको रुटमा पर्ने र फोहरले गर्दा चिललगायतका चराचुरुङ्गीले बाधा गर्ने प्राधिकरणको भनाइ थियो । गोदावरी नगरपालिकासँगमा कुरा भए पनि केही हुन सकेन ।
अहिले हामीले काठमाडौँमा जसरी एक-दुई दिन फोहर ल्याण्डफिल्ड साइट नजाँदा नै सडकमा छरपष्ट नहुने व्यवस्था मिलाएका छौँ । महानगरमा फोहर आन्तरिक रुपमा व्यवस्थापन गछौँ । थोरै फोहर फोहर स्टेशनमा सङ्कलन गर्छौं । दुईतीन साइटमा विर्सजन गरेर माटोले पुरेर व्यवस्थापन गछौँ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्ची आयो र पुनः रोकियो, हाम्रोमा खानेपानीको समस्या छ । मेलम्चीमा पचासौँ वर्षमा परेकोभन्दा बढी पानी परेकाले आयोजनामा क्षति भयो । काठमाडौँ उपत्यकामा ५० औँ लाख बस्छन् यहाँ एउटै स्रोतबाट पानी खुवाउँछु भन्दा त्यो जोखिमपूणर् हुन्छ । हामीले खानेपानीको वैकल्पिक स्रोत विचार गर्नुपर्छ भनेर गोदावरी र महालक्ष्मी नगरपालिकासँग मिलेर काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडसँगको प्राविधिक डिजाइनमा मकवानपुरको सिस्नेरी खोलाबाट पानी ल्याउन काम सुरु गर्न बजेट व्यवस्थापन गरेका थियौँ । अहिले सिस्नेरी खोलाबाट पानी खेर गरेको छ त्यो ल्याउँदा दैनिक १३ करोड लिटर पानी ल्याउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ ।
मेलम्ची आएपछि वितरण गर्दा कहाँकहाँ पानी पुग्दैन हेरेर वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने मेरो योजना छ । आकाशे पानी सङ्कलन र विद्यामान मुहान पानी संरक्षणमा ध्यान दिइनेछ । त्यति गर्दा नभए डिप ट्युवबेल खन्ने छौं । कुनकुन ठाउँमा पुग्छ र कहाँ अभाव छ हेर्नुपर्छ र त्यसैका आधारमा योजना बनाउनु पर्छ ।
सार्वजनिक यातायातमा समस्या छन् र त्यसलाई सुधार गर्ने हाम्रो योजना छ । हामीले साझा यातायात सहकारी संस्थामा लगानी गरेर गोदावरी, बुङ्मतिमा अहिले पनि बस चलिरहेका छन् र त्यो बढाउने योजना छ । महानगरभित्र विद्युतीय बस चलाइनेछ । त्यसका लागि अहिले साझामार्फत डेढ दुई महिनामा चार बस आउनेछन् । त्यसपछि चार किन्नका लागि प्रक्रिया हुनेछ ।
उपत्यकाका नगरले समन्वयमा विभिन्न काम गर्न सक्ने सम्भावना छ । त्यसमा के सोच्नु भएको छ ?
गएको कार्यकालमा महालक्ष्मी नगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकालाई वातावरणीय सुधार परियोजना भनेर सहयोग गरिएको थियो । सम्पदा सुधार भनेर गोदावरी चापागाउँको गुठी भवन बनाउन सहयोग गरेका थियौँ । गोदावरी नगरपालिकाको कटुवाल दहमा मन्दिर बनाउन सहयोग गरेका छौँ । अहिलेसम्म गाउँपालिकालाई सहयोग गरेको छैन । भगिनी सम्बन्ध कायम भएको जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा वातावरण सुधारका लागि सहयोग परियोजना छ । महानगरले छिमेकी नगरपालिका र गाउँपालिकालाई सहयोग गर्ने ट्रेन्ड नै बनिरहेको छ । आगामी दिनमा हामी बजेट पुस्तिकामा समेटेर सहयोग गर्नेछौँ । राससबाट